အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ပုဇွန်စတော်ဘယ်ရီ ချိုချဉ်ကြော်
25 Responses to “ပုဇွန်စတော်ဘယ်ရီ ချိုချဉ်ကြော်”
အမရေ စားချင်လိုက်တာ ဟင့် ခုတော့ ပုံတွေကိုပဲကြည့်ပြီး သားရေကျနေရတယ်. ..
ပုစွန်ချိုချဉ်ကြော်နဲ့ ပုန်းရည်ကြီးထမင်းသုပ် စားသွားပြီ.. :)
စားချင်တယ် .... စားချင်တယ် .... စားချင်တယ် ချောရေ ....
လုပ်တတ်လိုက်တာနော်။ ပြင်ဆင်ထားတာလဲ လှတယ်။
ပုန်းရည်ကြီးခြောက်မှုန့်တွေ ဗမာပြည်က ပို့ထားလို့ ထမင်းသုပ်လုပ်စားအုံးမယ်။
အစ်မချောရေ...ပာင်း အဆန်းလေး ဖြစ်တဲ့ ပုဇွန်စတော်ဘယ်ရီ ချိုချဉ်ကြော်ကို မြည်းကြည့်သွားတယ်။ ပာင့်...ပုန်းရည်ကြီး မစားရတာ ဘယ်နှစ်နှစ် ရှိပြီလဲ မသိး( ပုန်းရည်ကြီး ထမင်းသုပ်ကို သွားရေကျသွားတယ်။
မချောရာ ... အပြင်သွားနေရလို့ မနက်စာခုမှစားမှာ ..
မစားခင်ဖတ်လိုက်တော့ ပိုလို့ ပိုလို့ စားချင်လာပြီ၊
ဟင်းပြင်ဆင်ထားတာလည်းလှလိုက်တာ .. ပုန်းရည်ကြီးအရမ်းကြိုက်တာ
ပြင်ထားတဲ့ တစ်ပွဲစာကတော့ မ၀ဘူး အများကြီးစားချင်တယ်။
အယ် သူကလည်းကြွားလိုက်တာနော် :(
ဒါနဲ့ မချက်ခင်ကတည်းက ကြော်ငြာတာ အခုမှ
ဘလောဂ့်ပေါ် ရောက်တယ်။ ဘာအရသာမှ မရှိတော့ဘူး
ပုံထဲက ပန်ကန်တွေထဲမှာ :) ဘလောဂ့်ပေါ်မရောက်
ခင်ကတည်း ခဏခဏ သရေယိုပြီး အရသာ စုပ်ပလိုက်တယ်
ဟဟ ငါကွ။ ပုန်းရည်ကြီး ထမင်းသုပ် တော်တော် စိတ်ဝင်စား
သွားတယ်။ စားချင်စရာလေးနော် ကိုယ်လည်း မြန်မာပီပီ ကော်ပီ
ပါရစေနော် ချော :) မြေပဲဆံက ရစေ့နဲ့ တခြမ်း၊ ကြက်ဥက ၉စိတ်၊
ကြက်သွန်မိတ် တိုရှည်က ၄ပင်၊ ငရုတ်သီးစိမ်း မိသားစုက ၄တောင့်
ကြက်သွန်ဖြူက ၃မွှာနဲ့ အလှဆင်ထားသော ပုန်းရည်ကြီး ထမင်းသုပ်ကို
ကော်ပီပါတယ် ။ နောက်နေ့ လုပ်စားပါ့မယ် :)))) :DDDDD :PPPPPP
ရန်ကုန်မှာ အဆောင်နေရတဲ့ ကျနော့်အတွက်တော့ အရမ်းကောင်းမဲ့ ဟင်းခွက်တွေ ဖြစ်နေမှာ အမှန်ပဲ မချောရ..
အားလုံးကရှယ်တကာ့ ရှယ်တွေကြီးမို့ 
ရှယ်ရေ.. အဲ .ရှာရည် ကျသွားတယ်ဗျိုး..။
လုပ်စားကြည့်ဦးမှ ချောရေ ပုံတွေက အတော် ဆွဲဆောင်တယ်ဟ...:)
ချောတို့က လုပ်လိုက်ရင် အဆန်းကြီးပဲ ဆရာ... ဒါပေမဲ့ ပုဇွန်ဟင်းသက်သက် စတော်ဘယ်ရီ သက်သက်ပဲ စားချင်တယ်း)
ပုန်းရည်ကြီးထမင်းသုပ်ကတော့ နက်ဖြန်လုပ်စားကြည့်မယ်နော် ပြီးရင် အကြောင်းပြန်ကြားမယ် ဟဲဟဲ
ပုဇွန်တော့ ဘာနဲ့ချက်ချက် သဘောကျတယ်။
မကြိုက်တဲ့ ကြက်ဟင်းခါးသီးနဲ့ ရောချက်ရင်တောင် ပုဇွန်တော့ ရွေးစားလိုက်တာပဲ။
ပုန်းရည်ကြီးထမင်းသုပ် မြင်တော့ ငယ်ငယ်က ငရုတ်သီးစပ်စပ်နဲ့ သုတ်စားခဲ့တာ ပြန်သတိရမိတယ်။
ဟိုး အောက်နားလေးဆီက ရောသမမွှေလေး ရှလွတ်ဖြစ်သွားတယ်
ဒီမှာ ခရီးသွားရင်းလက်စနဲ့ဆိုတော့ အစားဂျီးများတဲ့ညီနဲ့ တွေ့ပြီဗျာ
အဲဒီမှာ မကြီးချောလက်ရာတွေ တွေ့တာပဲ တွေ့တာပဲ..အဲဒါ အဲဒါ..:P
ဒီနေ့ ရုံးမှာအလုပ်များနေလို့ ဘလော့တွေမလည်ဖြစ်ဘူး။ အိမ်ပြန်ရောက် ဖြစ်သလို dinner စားပြီးမှ ည ၁၂ နာရီလောက်မှ online ပေါ်ရောက်...မချော ဘလော့ကိုလဲအဖွင့်
ပုန်းရည်ကြီးထမင်းသုတ် ...ရှလွတ် ရှလွတ်..
ဘာတဲ့... စတော်ဘယ်ရီ ပုဇွန် ချိုချဉ်ကြော်....
အိပ်ခါနီးကို ဂယ်ပဲ နှိပ်စက်တယ်..
မြင်ရရုံနဲ့တင် ဘ၀င်ချမ်းမြ စားချင်လှပါပြီ။ ဖားကန့်ကို အလည်လာတဲ့အခါ ချက်ကျွေး သုပ်ကျွေးဖို့ မမေ့နဲ့ဦးနော်။ ဒါပေမဲ့ အမချောကလဲ ဇာတိမှာ သိပ်မြဲပုံမပေါ်ပါဘူး။ ဒါနဲ့။ တင်းပလိတ်တွေ ပြောင်းလို့ပါလား။ မျက်စိတောင် လည်သွားတယ်။ ပြောင်းပြောင်းချင်းဆိုတော့ တစ်မျိုးကြီးဘဲနော် အမ။ အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်ဆိုတဲံ နာမည်လေးနှင့် အစိမ်းရောင် တင်းပလိတ်ကလေးနဲ့က မျက်စိထဲ စွဲနေတာလဲ ပါမှာပေါ့လေ။
ပုန်းရည်ကြည်တော့အကြိုက် ပုန်းရည်ကြည်နဲ့များထမင်းစားရရင် စိတ်ကိုချမ်းသာလို့ တမယ်တည်းနဲ့အဆင်ပြေတယ်လေ။
အဲဒါကတော့ “ မုန့် ပေါင်း ” လုပ်နည်းကလေးတင်ပေး
“ ရွှေစင်ဦး ” ကိုလည်းတောင်းဆိုဘူးပါတယ်-
အဲဒါ “ ချောအစိမ်းရောင်လွင်ပြင် ” ကများတင်ပေး
အထူးမှတ်ချက်ကတော့ “ ကိုကြီးကျောက် ” ကလည်းစားချင်တယ်လို့ ပြောဘူးတယ်ဗျ-
မချောလဲ အချက်အပြုတ်ဝါသနာပါပြီး လက်ရာလဲမြောက်မယ့်ပုံစံရှိတယ်း)
လမ်းကြုံရင်တော့ အိမ်လည်လာဦးမယ်လို့ စဉ်းစားမိသား ဟဲ ဟဲ ... လောလောဆည်တော့ သရေကျပြီး အဝေးကနေ လှမ်းမျှော်သွားပီနော်
မချောရေ.. စတော်ဘယ်ရီ သွားဝယ်ပြီး တစ်ခွက်တော့ ချက်လိုက်ဦးမယ်ဂျာ.. ကျေးကျေးပဲ..
စတော်ဘယ်ရီ ကြိုက်ပါသည် ။ ပုဇွန် လည်း ကြိုက်ပါသည် ။ ဒီ၂မျိုး တွဲဖက်ပြီး ဟင်းချက်တာကို ခုမှ မြင်ဖူး ကြားဖူးပါသဖြင့် ပုံ များ ကို ကြည့်ပြီး .. ဂလု ဂလွတ် ... အစာအိမ်မှ အက်ဆစ်ဓါတ်များ အထွက်များလာပါသဖြင့် ..လောလောဆယ် ကိုယ့်ရှေ့ တွင်ရှိနေသော ရေ တခွက် ကို အမြန်ဆုံးသောက်ပြီး စိတ်ဖြေလိုက်ရပါသည် ...၊
( ဒါတောင် ပုန်းရည်ကြီးထမင်းသုပ် ၊မကြည့်ရသေးဘူး နော်၊ နောက်ထပ် ရေတခွက် အမြန်သွားခပ်ထားအုံးမှပဲ .. ) ..း))
လာထား...တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုး :) အကုန်လုံးဝါးမယ် တယ်တဲ့တယ်... :)
ပို့စ်ဖတ်ရင်း ရှလွတ် ကနဲ ဖြစ်ရပါကြောင်း။
ပုန်းရည်ကြီးထမင်းသုတ် ချဉ်၊ ငန်၊စပ်လေး လုပ်စားမယ်..။
P.S : ဘလော့စပေါ့နှင့်ကွန်မန့်အခုလို လွယ်လွယ်ကူပေးနိုင်တာ ချောရဲ့ ဆိုက်တခုပဲရှိတယ်ချောရေ..။ မိုက်သဟ !
ပုန်းရည်ကြီးထမင်းသုတ် မစားဖူးဘူး ...
သုတ်စားဦးမယ် ... ဟ ဟ
မိုက်တယ် ရှယ်ပဲ .......
(ဒါနဲ့ စကားမစပ် အမရေ my love cafe က ကိုသိင်္ဂါရကို မှတ်မိမလား ... သူက MLC ကလူတွေ ပြန်စုချင်လို့တဲ့ )